Imigomo | Ama-Mytrickstips
Ikhaya // Imigomo
IZIMISO ZENKONZO - I-TOS
Sicela ufunde 'Imigomo Yesevisi' ngokucophelela ngaphambi kokusebenzisa iwebhusayithi yethu. Ngokufinyelela noma ukusebenzisa iwebhusayithi yethu, usinika imvume yakho yokwabelana futhi usebenzise ulwazi oluthunyelwe kusayithi lethu nguwe. Njengokwemigomo yesevisi yethu, ukhona 'ukuvuma' futhi 'ukwamukela ' kule migomo ngokusebenzisa iwebhusayithi yethu nganoma iyiphi indlela.
Iwebhusayithi yethu ingaba nezixhumanisi eziningana kumasayithi wesithathu. Asihambisani ngokuqondile nanoma yiliphi lawa mawebhusayithi. Ngaphezu kwalokho, zonke izinto kanye nama-logos ahlobene nawo HHAYI ephethe futhi elawulwa yithi. Ubunikazi nokulawulwa kwezakhiwo zobuhlakani kunabanikazi abathintekayo. Asicabangi imithwalo yemfanelo mayelana nabo.
Ayikho ingxenye ye-website yethu ekuhloswe ukuthi inikeze noma yiluphi uhlobo lwezincomo noma iziqinisekiso. Ngeke sibe nesibopho nganoma yiluphi uhlobo lomonakalo kuwe noma ibhizinisi lakho njengomphumela wokuvakashela noma ukusebenzisa isayithi lethu nganoma iyiphi injongo. Asiqinisekisi konke okushiwo noma okushiwo ulwazi kanye nezinsizakalo esizihlinzekayo kwisayithi yethu.
Sigcina ilungelo lokulungisa noma yikuphi ukungalungi kokuqukethwe kuwebhusayithi yethu ngaphandle kokunikeza isaziso esandulele. Asiqinisekisi ngaso sonke isikhathi ukuthi amaphutha azobekwa ngokushesha. Ngaphezu kwalokho, asithembisi ukuthi iwebhusayithi yethu izotholakala ngaso sonke isikhathi. Ulwazi olusayithi lethu akuyona incwadi yokubusa futhi akumele kubhekwe njenge-legal, financial, noma usizo lwezokwelapha. Okuqukethwe okushicilelwe kungokwenhloso yolwazi kuphela hhayi esikhundleni sokubonisana kochwepheshe.
Usebenzisa iwebhusayithi yethu engozini yakho. Asiwona obhekene nanoma yimiphi imiphumela engase ivele ngaphandle noma mayelana nokusetshenziswa kwezinsizakalo zethu noma iwebhusayithi nganoma yiluphi uhlobo noma ngendlela. I-onus i-100% yakho ngisho noma isayithi lethu liye lachazwa ngokucacile ngokulahlekelwa okungenzeka. Uyavuma HHAYI ukusibophezela nganoma yiluphi uhlobo lokulahleka, umonakalo noma izikweletu ngaphansi kwanoma yiziphi izimo, kungakhathaliseki ukuthi ziqondile, zingekho ngqo noma zifanele.
Nakuba yonke imizamo ithathwa ukuze kuqinisekiswe ukuthi ulwazi kwiwebhsayithi lethu lilungile, asiqinisekisi ngokunemba noma ukuphelela kwayo. Akukho okunye okushicilelwe kule webhusayithi kuzokwenza; (a) Mkhawulo noma ungafaki ukulimala kwakho noma ukufa kwakho okuvela ngenxa yokunganaki. (b) Nciphise noma ungabandakanyi ukubophezela kwakho noma ukukhokhiswa kwanoma yiluphi uhlobo. (c) Nciphisa noma ungabandakanyi ukubophezela kwakho noma okusemthethweni kunoma yini engavunyelwe umthetho. (d) Nciphisa noma ungabandakanyi ukubophezela kwakho noma okungeke kukhishwe ngaphansi komthetho osebenzayo.
Sinikeza ngemigomo yethu yesevisi kuphela ngesiNgisi. Ngokusebenzisa iwebhusayithi yethu, uyavuma ukuthi i Imigomo Yesevisi okubekwe kithi kunengqondo. Uma ungavumelani, ukwaziswa ukuthi ungasebenzisi iwebhusayithi yethu. Ngaphansi kwezimo, kufanele uqhubeke usebenzisa isayithi lethu uma ungavumelani nayo yonke imigomo yesevisi evezwe nguwe.
Njengenhlangano yokuzimela emele futhi elinganiselwe, sinelungelo lokuvikela nokulinganisa izikweletu zethu. Ngakho, khumbula ukuthi usebenzisa kanjani iwebhusayithi yethu. Njengesimo sokusebenzisa, uyavuma ukuthi ngeke ulethe noma yikuphi ukuphikisa ngokumelene newebhusayithi yethu noma abasebenzi bethu nganoma yikuphi ukukhokhelwa noma ukulimala ongase uhlupheke mayelana nokusetshenziswa kwewebhusayithi yethu. Ngendlela efanayo, uyavuma ukuthi imigomo yesevisi yanele ngokwanele ezandleni zakho ukwamukela ukuthi umshicileli we-website yethu uzosivikela kanye nabasebenzi bethu ngokumelene nanoma yiziphi izimangalo ezifakiwe kithi.
Uma ngabe iyiphi ingxenye ye-disclaimer ye-website ayihambisani nomthetho osebenzayo, ngeke ithinte ukuqiniswa kwamanye imigomo yesevisi okuvezwe kuleli khasi. Ngaphezu kwalokho, siyakulahla zonke izikweletu ezibangelwa noma yiziphi izinkampani zangaphandle ezihlobene nathi nganoma iyiphi indlela. Sisebenza njengendoda-phakathi ukunikeza amakhodi mahhala kuzivakashi. Asihlanganisi ngokuqondile noma sihlotshaniswa nanoma yiziphi izakhiwo zomuntu siqu zamasayithi wesithathu.
Izinsizakalo zethu zamahhala / ulwazi luhlinzekwa "NJENGENYE" ngaphandle kwanoma iyiphi iwaranti noma izintambo ezixhunywe kuyo. Ngakho-ke, asiqinisekisi ukuthi isixazululo esinikezwa sizosebenza ngaso sonke isikhathi. Sihlose ukukunikeza amakhodi wesipho samahhala, kepha asikwazi ukuthembisa ukuthi ikhodi izosebenza i-100% yezikhathi. Futhi, kufanele uvumelane ukugcwalisa izinyathelo ezidingekayo zokuvula ikhodi, okungadinga ukuba uqedele ucwaningo ezimweni eziningi. Ngamakhono ethu angcono kakhulu, sizama ukunikeza izinhlolovo "ezingekho izindleko," kodwa yizwe elithile. Ngakho-ke, noma yiziphi izindleko ezihlobene nokuhlola akuwa ngaphansi kwegunya lethu.
Sinegunya lokwenza izinguquko kwi "Imigomo Yesevisi" nganoma yisiphi isikhathi ngaphandle kwesaziso esandulele. Kungumsebenzi womsebenzisi ukuhambisana nezinguquko zamanje. Umsebenzisi uzothola imigomo nemibandela ebuyekeziwe kuleli khasi elifanayo. Uma unemibuzo eminye mayelana nemigomo yesevisi kuwebhusayithi yethu, uzizwa ukhululekile ukuxhumana nathi.